Wareysi: Murashax Maxamed Cilmi Afrax | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Wareysi: Murashax Maxamed Cilmi Afrax
Wareysi: Murashax Maxamed Cilmi Afrax
Wargeyska Xaqiiqa Times wuxuu wareysi la yeeshay Maxamed Cilmi Afrax oo ka mid ah murashaxiinta madaxweynennimo ee maamulka lagu wado in loo dhiso gobollada Mudug iyo Galgaduud. Waxaan wax ka waydiinnay ololaha uu ku jiro, waxa ku dhaliyay inuu ka qeyb galo tartanka iyo waxyaabaha uu doonayo inuu ka qabto gobolladaas.
Xaqiiqa: Waxaad dhawaan socdaal ku tagtay gobollada dhexe, aad ayaana lagugu soo dhaweeyay, ugu horreyntii maxaa kugu dhaliyay in aad u tartanto madaxtinnimada Gobollada Dhexe oo dad badan ay u arkaan in ay tahay wax aad u dhib badan?
Cilmi: Arrintaan ma ahan runtii go’aan sahlan in la qaato, in aan u soo istaago tartanka madaxtinnimo ee Gobollada Dhexe waxaa igu dhiirrageliyay anigoo 20 sano muddo ka badan kasoo shaqeynayay, xog-ogaalna u ah dhibaatada gobolladaas ka jirta, waxaana doonayaa in aan ka samatabixiyo dadkeyga iyo deegaankeyga dhibatooyinka, welibana anigoo kaashanaya dadkii aan la shaqeynayay muddada dheer.
Xaqiiqa: Sidee uga samatabixineysaa dhibaatooyinka?
Cilmi: Waxaan uga samatabixinayaa maadaama aan garanayo xalka dhibaatooyinka ka jira deegaanka, oo aan ogahay waxa dhexyaalla dadka deegaannadaas, sidoo kalena aan ogahay kalsoonida ballaaran oo ay igu qabaan dadkeyga Gobollada Dhexe.
Xaqiiqa: Maxaa dawo u ah dhibaatooyinka aad dooneyso in aad xalliso?
Cilmi: Ugu horreyn waxaa dawo u ah, in dib-u-heshiisiin loo sameeyo beelaha dega Gobollada Dhexe. Labo in nabadgelyo iyo kala dambeyn la helo, kaddibna loo gudbo sidii adeegyada aasaasiga ah sida; caafimaadka, waxbarashada, biyo nadiif ah iyo wixii kaloo soo raaca loo soo nooleyn lahaa.
Xaqiiqa: Muxuu yahay barnaamijka aad dooneyso in lagugu doorto oo murashixiinta kale aad uga duwan tahay haddii aad eegtay baahiyaha gobolka?
Cilmi: Waxaan uga duwanahay murashixiinta kale in aan soo bartay cilmiga horumarinta bulshada, waaya-aragnimana aan u leeyahay, marka waxaan doonayaa in aan sameeyo horumar dhinac walba ah, in aan qaabka dib-u-heshiisiinta loo abaari jiray qaab ka duwan u abbaaro.
Xaqiiqa: Sidee ayaad u abbaareysaa bal haddii aad faahfaahiso?
Cilmi: Waxa looga baahan yahay Gobollada Dhexe ayaa ah dib-u-heshiisiin gun ballaaran oo leh garsoor iyo fulin, waayo mar walba wax baa la isku raacaa wixiina ma shaqeeyaan ama waqti yar ayay shaqeeyaan. Deegaankan waxaa ka maqan dib-u-heshiisiin, garsoor fiican iyo fulin oo mar kasta maadaama wixii lagu heshiiyana meesha ay ka maqan yihiin, waxaan doonayaa labadaas arrimood in aan xaqiijiyo, haddii uu Alle idmo iyo in aan ka shaqeeyo yareynta iyo dabar-goynta gaajada iyo faqriga ka jirta Gobollada Dhexe.
Xaqiiqa: Sidee u yareyneysaa faqriga ama saboolnimada?
Cilmi: Waxaan ku yareyn doonaa; koow in shaqo-abuuris aan u sameyno dadweynaha, waa in dadku ay is-dhexgalaan, ganacsigu isku furmaa. Waa in la helaa jewi oggolaanaya hirgelinta dhammaan arrimaha aan soo xusay.
Xaqiiqa: Murashax kasta wuxuu sheegaa qodobbadaan aad ka dhawaajisay, inta badanna kama fulaan, laakiin markii la eego dhibaatooyinka jira waxaa la sheegaa in gobolkan uu yahay gobolka ugu dhibka badan Soomaaliya oo dadkiisu in muddo ah ay colaado kusoo dhex jireen marka arrinkaa ma u diyaar garowday?
Cilmi: Si fiican baan u fahamsanahay, balse ma qabo in uu yahay gobolka ugu dhibka badan Soomaaliya. Ee waxaan qabaa keliya in gobollkaan aan la horumarin xilligii dowladda uuna ka hooseeyay dhinaca horumarka gobollada kale, aad ayaa loo hagraday wax kasta sababtu ha ahaatee. Marka waxaan aaminsanahay haddii gobolkaan la soo celiyo amnigiisa oo dib-u-heshiisiin la dhex dhigo dadka dega, oo kala dambeyna loo sameeyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini’aadamka, qof kasta oo bulshada Gobollada Dhexe ahna wux uu helayaa xuquuqdiisa, gobolkana waxaan aaminsanahay in uu ka mid noqon doono gobollada ugu fiican Soomaaliya sida hadda loo leeyahay in uu yahay gobollkaan meeshi ay ka billaabatay colaaddii dalka – in nabada Soomaaliyana ay ka hirgeli doonto.
Xaqiiqa: Maxaad is leedahay waad uga mudan tahay murashixiinta kale in lagu doorto?
Cilmi: Marka hore muddo 20 sano ah ayaan ka shaqeynayay Gobollada Dhexe, muddadaasina waqti yar ma ahan, waxyaabo badan baan kasoo qabtay, waxyaabo badanna waan la soo kulmay, xaalado badan ayaan xogogaal u soo ahaa, intaan meesha joogayna waxaan ahay qofka keliya ee howlaha samafalka ka soo shaqeeyay, taasna waa fursad ii gaar h.
Xaqiiqa: Maxay yihiin caqabadaha aad isleedahay way ku hortaagan yihiin?
Cilmi: Caqabado badan baa iska jira guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Gobollada Dhex, tusaale ahaan xukun waa lagu guuleysan karaa laakiin mas’uuliyadda ayaa waxay tahay wax culus oo walwal badan, waayo wax baa lagugu aaminayaa, amaanana walwal ayay leehay, balse dhinaca kale aniga wax caqabad ah oo ii gaar ah ma lahan, laakiin siyaasad ahaan jewiga guud ee Gobollada Dhexe wuu iska adag yahay.
Previous articleBooqashada Erdogan: Hiil Walaal oo aan la Hilmaami Karin
Next articleSuudaan Oo Joojisay Dal-ku-galkii Ay Siin Jirtay Soomaalida